लकडाउनले विक्षिप्त यूरोप, के गर्दैछन् यूरोपमा नेपालीहरु ? – www.EUnepal.com
HomeArticleलकडाउनले विक्षिप्त यूरोप, के गर्दैछन् यूरोपमा नेपालीहरु ?
March 30, 2020 Kejin Rai Article, Gallery 0
लकडाउनले विक्षिप्त यूरोप, के गर्दैछन् यूरोपमा रहेका नेपालीहरु ?
ब्रसेल्स- बेल्जियम ,मार्च २३ ।
कोरोना भाईरस कोबिड १९ को बढदो विश्वव्यापी संक्रमणसंगै सिंगो यूरोप बिक्षिप्त बनेको छ । अधिकांस युरोपेली मुलुक लक डाउनमा रहेको छन् । पहिलो चरणको घोषित लकडाउनको मिति स्पेन – ईटालीले थपिसकेको छ ।
घर बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्कन सरकारले सूचना जारी गरेको छ । अहिले छिमेकी देशमा जानआउन कडाई गरिएको छ । बिनाकारण एउटा शहरबाट अर्को शहर तथा समुन्द्रीकिनार नजान पनि भनिएको छ। एचएलएन डट बीईका अनुसार अवहेलना गरिएको पाईएमा अष्ट्रियामा ३४ सय यूरो, बेल्जियममा ४ हजार यूरो वा ३ महिना जेल सजाय यसका उदाहरण हुन ।
एक लाख बढी नेपाली नागरिक अत्यासलाग्दो अवस्थामा
घरभित्रै क्वारेन्टाईनमा रहदा ईटाली , स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स,अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेल्जियम,नेदरल्यान्ड, डेनमार्क,नर्वे , पोर्चुगल, पोल्याण्ड लक्जेम्बर्ग लगायतका मुलुकका बासिन्दा बाहेक १ लाख भन्दा बढी नेपाली समेत अत्यासलाग्दो जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् ।
सबैभन्दा अत्यासलाग्दो जीवन ति नेपालीको छ जसको बस्ने अनुमति कार्ड छैन , कागजी प्रक्रियामा छन र रोजगार विहीन रहेका छन् । यस्ता नेपालीको समस्या अधिक संख्या पोर्चुगल , ईटाली, माल्टा पोल्याण्ड,स्पेनमा रहेका छन् ।
युरोपबासी नेपालीहरूको त्रास सामाजिक सञ्जालमा भययुक्त विचारहरू सम्प्रेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न राहत प्याकेज बेल्जियम लक डाउन अबधिभर ३० हजार बढी कम्पनीका कामदारहरू काम नगरी घरमा रहेको बखत ८० प्रतिशत तलब पाउने, व्यवसायीहरूले २ हप्ताको ४ हजार युरो लगायत पाउने आदि घोषणा गरिएपनि संक्रमणको अन्त्य कहिले हुने भनेर सबै युरोपेली नागरिक औधि नै चिन्तित रहेका छन् ।
सधै ब्यस्त रहने बाटोघाटो सुनसान छ, पर्यटक स्थल ,पार्क समग्रमा शून्य प्राय रहनुका साथ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन न्यून रहेकोछ । २० मार्चका दिन यूरोपेली संघको बैठकले ईटालीलाई ११ बिलियन यूरो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ युरों न्युज टेलिभिजन च्यानलका अनुसार । तर अप्रत्यासित रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या कहालीलाग्दो तवरले दिनहुँ अन्य सदस्य मुलुकहरूमा बढिरहेको कारण थप अन्योलता बढिरहेको प्रष्ट छ यूरोपमा ।
ब्रसेल्समा शरणार्थी लिने काम बन्द शरणार्थी होटेलमा
युरोपको राजधानी ब्रसेल्सको पेटिप चाटेउमा रहेको शरणार्थी केन्द्रमा नया आप्रबासीहरूको लागि अनिश्चितकालको लागि बन्द भएको ब्रसेल्सटाइम्स दैनिकमा उल्लेख छ । स्वास्थ र आप्रबास मामिला मन्त्री म्याग्गी दे ब्लकले सिंगो मुलुकमा राष्ट्रिय बिपत्ति परेको बेला चाहेजत्ति आप्रवासीलाई ध्यान दिन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् ।
ब्रसेल्सको नर्थ स्टेशन म्याक्सीमिलियन पार्क वरपर यत्रतत्र कागज, बोरा ,बर्षादीको पाल टाँगेर १ डिग्री सम्म जाडोमा दिनरात कटाउन बाध्य सयौंको संख्यामा आप्रवासीहरू रहेका थिए । जो ब्रसेल्समा शरण लिन चाहनेहरूको दर्दनाक र भयाबह क्षणलाई मानवीयताको आधारमा सो स्थानमा रहेको फेडासिल लगायतले तारे होटलहरूमा ३ सय २० जनालाई खान बस्ने बन्दोबस्त गरिएको छ ।
पोर्ते दे युल्से ,सारवीकमा शरणार्थीका लागि रहेको आवास भवनहरू भरिभराउ रहेको कारण ब्रसेल्सका मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट रुडी भेर्भरेटले मानवीयताको आधारको काम धन्य हुने बताएका छन ।
जर्मनीले फ्रान्सका कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने
फ्रान्सका कोरोना संक्रमित गम्भीर बिरामीहरुलाई जर्मनीको अस्पतालहरुले सघन उपचार कक्ष आईसीयुमा उपचार गराउने भएको छ । १२ भाषामा बोर्डकाष्टहुने युरों न्यूजका अनुसार दक्षिण पश्चिम फ्रान्ससँग सीमा जोडिएका जर्मनीमा रहेका केही राज्यहरुले यो सहयोग गर्न लागेका हुन् ।
अहिले सम्मको तथ्यांकमा फ्रान्स भन्दा जर्मनी आफैंमा झन्डै १० हजार कोरोना संक्रमित संख्याले बढी भएको देश हो । तर जर्मनीको मृत्यूदर फ्रान्सको भन्दा निकै कम छ । विश्वभरमा अमेरिका पछि दोश्रो अधिक संख्यामा छ आईसीयु सघन उपाचार कक्ष जर्मनीमा ।
फ्रान्समा सरकारी र निजी गरेर ९ हजारको संख्यामा मात्र सघन उपचार कक्ष छ भने जर्मनीमा २८ हजारको संख्यामा छ । कोरोना भाईरस लागेका बिरामीलाई १५ दिनसम्म सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सघन उपाचार कक्ष आईसीयू , फ्रान्समा ५ हजार सरकारी र ४ हजार निजी अस्पतालमा गरेर कुल ९ हजार, ईटलीमा ५ हजार ९०, स्पेनमा ४ हजार ४ सय ४ र
स्वीट्जरल्याण्डमा १ हजार, बेल्जियममा २ हजार ६ सय ९५ र सबैभन्दा बढी जर्मनीमा २८ हजारको संख्यामा रहेको छ ।
पोल्याण्डमा कोरोना भाईरस मार्न ५ लाख लिटर भोड्का प्रयोग
कोरोना भाईरस मार्न युरोपेली मुलुक पोल्याण्डले ५ लाख लिटर भोड्का प्रयोग गरिरहेको छ । ब्रसेल्स टाईम्सका अनुसार पोल्यान्डको कस्टम अफिसबाट बरामद भएका र अबैध रूपमा उत्पादित घरेलु अल्कोहल भोड्का जम्मा गरी कीटनाशक औषधि बनाई प्रयोजनमा ल्याईएको कुरा राष्ट्रिय सार्बजनिक अभियोजक कार्यालयले जनाएको छ ।
कीटनाशक औषधि अल्कोहल जेलको रूपमा परिणत गर्न रसियाको सीमावर्ती ईलाकाको भन्सार कार्यालयबाट अधिक संख्यामा जम्मा भएको थियो । ओल्सजेन, ईल्बेर्गबाट २ हजार ५ सय लिटर , कालिनग्राड भन्सार कार्यालयबाट मात्रै १० हजार लिटर अबैध भोड्का नियन्त्रणमा लिईएको थियो । पोल्यान्डमा नेपालीको जनसंख्या ६ हजार माथि रहेको अनुमानित तथ्यांक रहेको छ ।
फेसबुक ईन्स्टाग्रामाथि युरोपमा ३० दिन नियन्त्रण
युरोपमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भिडियोहरूको प्रवाहलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाइनेछ नयाँ कोरोना भाइरस महामारीको प्रकाशमा नेटवर्कको जाम,भीडबाट जोगिन, फेसबुक युरोपले आइतबार घोषणा गररेको छ । त्यसो गर्दा, फेसबुक ,नेटफ्लिक्स र गुगलले समस्या निकाकरणको लागि यो उपाय निकालेको हो ।
फेसबुक यूरोप आन्तरिक बजार कमिस्नार थियरी ब्रेटोनले भनेका छन् “कुनै पनि सम्भावित नेटवर्क भीड सीमित गर्न मद्दतको लागि, हामी अस्थायी रूपमा युरोपमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भिडियोहरूको लागि बिट दरहरू घटाउनेछौं,“ फेसबुक प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा भने। फेसबुक अघि, नेटफ्लिक्सले बिहीबार घोषणा गर्योप कि यसले युरोपमा सबै स्ट्रिमहरूमा बिटरेटहरू ३० दिनका लागि घटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रवार, गुगलले यूट्यूब भिडियो सेवाको लागि पनि त्यस्तै गरि सकेको छ ।
युरोपमा नेपालीको निधन र संक्रमण
पोर्चुगलको अल्गार्भ फारोमा १ जना संक्रमित र ३ जना क्वारेन्टाईनमा रहेका छन् । बेलायतमा लिला बहादुर राईको निधन र अन्य १ जना सक्रमित साउथ ह्यारो लन्डनको अस्पतालमा- सघन उपचार कक्षमा रहेको बाहेक पुरै युरोपभर अन्य तथ्यांक आईसकेको छैन ।
नेपाली दूतावासहरू के गर्दैछन
बेनेलक्स र यूरोपियन युनियनका लागि राजदूत लोक बहादुर थापाले उच्च सतर्कता अपनाएको बताउनु भएको छ । साथै आईपर्ने बिपत्ति बारे आवश्यक समन्वय र तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ । हिजो राति ब्रसेल्समा न्यूज २४ संग ओरेंज फोनमा उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
नेपाली दूताबासहरूले केही समय अघि यूरोपमा रहेका नेपालीहरूलाई संयमित हुन बक्तब्य जारी गरि सकेका छन् ।
युरोपका नर्बे ,स्वीडेन, लातभिया,फिनल्यानड, आईसल्यानड डेनमार्क हेर्ने नेपाली दूताबास कोपनहेगनबाट राजदूत युबनाथ लम्सालले भने हाल सम्म नेपालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिएपनि संक्रमणको संख्या पूरै युरोपेली मुलुकहरूमा कहालीलाग्दो तवरले बढेको बताउनु भयो ।
राजदूत लम्सालले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारहरू संग समन्वयमा रहेको र उच्च सतर्कतामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
बेल्जियममा बुद्द धर्मावलम्बी रहेको राष्ट्रीय तथ्यांकमा उल्लेख